Inqubomgomo Yokubuyisa - Buka I-Rapport
Ukubuyiselwa nokubuyiselwa kwemali kwenziwa lula
Ukubuyiselwa kwamahhala kwezinsuku ezingama-30
I-Watch Rapport izinikele ekuhlinzekeni amakhasimende ayo ngensizakalo ehlukile kanye nokwaneliseka kwamakhasimende okungenakuqhathaniswa. Ukwenza lokho, sizokwamukela ngenjabulo ukubuyiselwa okufanelekile zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku owathola ngalo into yakho.
Ngezansi kukhona uhlu lwento efanele ukubuyiselwa.
Yonke imbuyiselo (ngaphandle kwento eyonakele) kufanele imakwe phakathi nezinsuku ezingama-30 zokulethwa (ukulethwa kuchazwa njengalapho usayina ukuthi uyitholile leyo nto).
Uma into ilethwe yonakele, ungayibuyisa leyo nto futhi kufanele imakwe kungakapheli izinsuku eziyi-7 ihanjisiwe (ukulethwa kuchazwa njengalapho usayina ukuthi uyitholile leyo nto).
Zonke izinto ezibuyisiwe kufanele zibe sesimeni esifanayo, kufaka phakathi wonke amathegi, amabhokisi, izincwadi, izitika, izimpawu nezisongelo, ukupakisha, nezinye izinsiza.
Into akufanele igqokwe, iphazanyiswe, noma yehliswe nganoma iyiphi indlela.
Lapho itholwa, into ebuyisiwe izohlolwa ngomunye wochwepheshe bethu ukuqinisekisa ukuthi leyo nto isesimweni sokuqala eyayithengiselwe yona nokuthi ifaka wonke amathegi, izinto, izesekeli, njll., Ngaphambi kwe-Watch Rapport izokhipha imali ebuyiswayo.
I-Watch Rapport ayinasibopho somonakalo omusha noma okokugqoka entweni yakho ngemuva kokuthenga. E-Watch Rapport, izinto eziningi zinabanikazi bokuqala futhi asikwazi ukuhlonipha noma yiziphi iziqinisekiso eziqondene nomkhiqizo njengoba singeyona ingxenye yenqubo yokukhiqiza. Ochwepheshe bethu baqeqeshwe kahle ukubheka noma yiziphi izimpawu zokugqoka noma zokulimala kepha abakwazi ukubona ukuthi ukusetshenziswa kwesikhathi esizayo kuzoba nomthelela muni entweni.
Ungaphatha ukubuya kwakho ngokuya ezansi kwekhasi ku-Watch Report bese uchofoza ku "Ukubuyiselwa Okulula". Lokho kuzokuletha ku- "Return Center" yethu, faka inombolo yakho ye-oda nekheli le-imeyili. Landela imiyalo bese ukhetha into ofuna ukuyibuyisa. Lapho isicelo sakho sesivunyiwe, uzothola isiqinisekiso esithunyelwe nge-imeyili kuwe nemihlahlandlela yokuthumela.
Ngenxa yohlobo lwenqubo yokuhlola, sicela waziswe ukuthi ukuvunywa ngokuvamile kuthatha okungenani izinsuku eziyi-10. Uma sesivunyiwe, isicelo sakho sokubuyiselwa imali sizocutshungulwa ngokushesha. Yonke imbuyiselo izokhokhiswa imali engu-10% yokwenza kabusha, ngaphandle uma imbuyiselo yakho ingoba into leyo bekungukuthi:
Ukubuyiselwa kwemali okufanelekile
Ngezansi kukhona uhlu lwezinketho ezifanelekele ukubuyiselwa imali
futhi kungabi namali ekhokhwayo yokuqalisa kabusha.
Hhayi njengoba kuchaziwe
I-replica noma inkohliso
Okwenziwayo okungagcwaliswanga (imigomo ingasebenza)
Ukuthumela & ukulethwa kwesikhathi ozimele
Uzobuyiselwa imali ngokususelwa endleleni yakho yoqobo yokukhokha
Uma uguqula Amabhange phakathi kokuthenga nokubuyisa leyo nto, kungumsebenzi wakho ukuxhumana nesikhungo sakho sangaphambilini sasebhange ubazise ukuthi kuzobuyiselwa imali kwi-akhawunti. Samukela izimbuyiselo kuma-oda aphesheya. Ukuthunyelwa kwamazwe omhlaba nakho konke ukubuya kwezinto ezithunyelwa emhlabeni wonke kuzokwenziwa ngamaDola aseMelika kuphela nangemali efanayo yeDola laseMelika esikhokhelwe yona ngesikhathi soku-oda. Asikwazi ukunikeza noma yiziphi izilinganiso zokushintshaniswa kwemali njengoba la mazinga ehla enyuka njalo. Konke okwenziwayo kungaphansi kwesilinganiso sokushintshaniswa ngesikhathi sokucutshungulwa futhi kunqunywa yizikhungo zezimali ezingumlamuli. Asenzi ukulungiswa kokushintshaniswa kwemali ekubuyiseni.
Faka inombolo ye-imeyili ne-oda
Qiniseka ukuthi i-imeyili yakho kanye nenombolo ye-oda kuyasiza. Uzodinga
Khetha isizathu sokubuyela kwakho
Khetha kunoma yiziphi izinketho ezitholakalayo ukuze uchaze isizathu sokubuya kwakho
Sitshele ukuthi singayixazulula kanjani
Khetha ikhredithi yesitolo, ukushintshanisa, noma ukubuyisela imali endleleni yakho yokuqala yokukhokha
Gcwalisa bese uthumela isicelo sakho
Buyekeza imininingwane yokubuyisa kwakho, gcwalisa, bese uthumela
Ngabe ngiyayibuyisa imali yami uma leyo nto isetshenzisiwe?
Kuya ngokuthi. Uma isimo sento sisho ukuthi sisetshenzisiwe, siphethwe ngaphambilini, noma "asigqokiwe", sihlola isimo sento ngesikhathi senqubo yethu yokuhlola ngezici ezithile bese sinquma ukuthi ingabe into isesimweni sokuthengisa noma cha. Uma le nto ithathwa njengesetshenzisiwe, ikakhulu ibhekisa enanini lokuguga, ukuklwebheka, izikhafu, njll. Lezi zindaba zivame ukusingathwa ngamacala ngamacala. Ukungakhathazeki! Silapha ukuzosebenzisana nawe uma uthola into engekho njengoba kuchaziwe.
Kuthiwani uma into ingeyiqiniso?
Uma into ingeyiqiniso, isifaniso, noma inkohliso, ungayibuyisela kithi zingakapheli izinsuku ezingama-30 ukuze ubuyiselwe imali ephelele. Uzodinga ukuhlinzeka ngemibhalo esekelayo emthonjeni oqinisekisiwe noma oqinisekisiwe ofakazela ukuthi leyo nto ayiqinisile.
Kuthiwani uma ungakwazi ukufeza i-oda lami?
Uma singakwazi ukufeza i-oda lakho, sizokhansela i-oda lakho futhi sinikeze imali mbuyiselo egcwele ngokushesha, noma sinikeze imbuyiselo bese sishiya okwenziwayo kuvuliwe size sithole okuzoyifaka. Ungakhetha ukukhansela i-oda noma kunini ukuze ubuyiselwe imali ephelele uma singakayitholi leyo nto kumthengisi. Ukuthengiselana kwakho kusekelwa yisiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola imbuyiselo?
Sisebenza ukubuyiselwa kwemali futhi sikhiphe izimali kusuka ekugcineni kwethu kungakapheli amahora angama-24-48. Kodwa-ke, ngokuya ngesikhungo sakho sezezimali, amakhredithi angathatha izinsuku ezi-10 zebhizinisi ukuthumela emuva ku-akhawunti yakho. Akubandakanyi izimpelasonto noma amaholide asebhange.